ROORROO BIYYA ABBAATI MOO TAN BIYYA AMBAATU HAMTUUDHA? – Welcome to bilisummaa
ROORROO BIYYA ABBAATI MOO TAN BIYYA AMBAATU HAMTUUDHA?
Gaafa tokko haboon umriin lafa bulte takka akkana naan jette.
“Gaafa dargiin kufee maqaan Oromoo je’amu haala gaariin kaafamu jalqabe san Ani jabuutiin jira. ABOn leencoo faan hogganamtuu fii ABOn Sheekh Jaarraa Abbaa Gaddaa faadhan hogganamtu bakka adda addaa qubatanii jiran. Oromiyaan tan oromooti wanni je’amu gamaa gamanaa dhagayama. Duuba gaafa San Jabuutii Oromoonni jirru kabajaa arganne. Somaalee fii Affaar duraan Qottii jettee afaan nu fuutu amma Oromoo ‘Isin fira keenya.’ Ilmaan Adeerraniiti jechuun ol nu fudhuu jalqaban. Xiqqo booda Waraanni ABO leencoodhaan hogganamtuu akka Horiitti mooraatti if galche. Xiqqo Booda wanni hundi bakka duritti deebite. Jabuutiitti Somaalee fii Affaaris bakka Isaanii tan duraanitti deebi’an. Nutillee bakka teenya tan duraanitti deebine. Tuffatamuu fii arrabsamuun daran haala oowwaan itti finiine. ‘Qottii faayidaa hin qabne. Qottii horii.’ nuun jechuutti deebi’an.” jechuun Seenaa kana na taphachiifte.
Arra Oromoon teenya hedduun biyya biraatti baqattee jiraattu hoggaa qilleensi hamaan itti bubbuse warra biyya itti baqatanii san warra biyyaa Isaan baase caalaa komatan.
Dura biyya teetitti maal turte? Dura Abbaa biyyaa taatee akka namaatti kabajaa argattee?
Yaman dheeyxee akka warri Yaman biyya Isaanitti kabajaman sanitti kabajamtee?
Jabuutii dheeyxee akka warri Jabuutii biyya Isaanii keeysatti mirga qaban sanitti Ati biyya tee keeysatti mirga argattee?
Somaaliyaa dheeyxee akka Somaaleen biyya isii keysatti Osoo mootummaa hin qabne mataa ol qabattee jiraattu sanitti ati biyya tee keeysatti jiraattee?
Su’udii dheeyxee gartee ati akka warra su’udii san biyya tee keeysati taatee jiraatte?
Yoo dhugumaan biyya akka orma biraatti kabajaan keesya jiraachaa turte keeysaa baqattee midhamte dhugaan roorroon jaraa daangaa sitti dabre. Ammoo yoo dhugumaan akka ormaa sanitti biyya tee keeysatti hin kabajamin Ormarraa roorroon sirra gahu kanuma duraan biyyattis sirra gahaa turee haarawa sitti hin tahin.
Nama biyyaa fii ganda Isaatti kabajameetu biyya namaatti kabajaa dhabuu Isaatiif gadda. Nuti Biyya teenyatti kabajaa ilmi namaa uumamaan qabu dhabnee tan arabaa akka waan addaatti laalla.
Roorroob biyya abbaa hundarra hammachuun rakkoo nuti keeysa jirru, tan abbootirraa dhaalle.
biyya abbaati moo biyya ambaatti? lamaanuu biyya ambaati jennee walii gallu ammoo usnee jiraachuu qofa. biyya abbaa qabna yoo jenne biyya abbaa barbaadachuudha!!?
Previous Yaa Umare Dilii Maalif Ajjeechaan Akkana Sirratti Raawwatte.??
Next Abused Domestic Servant Who told me she is From Ethiopia I met at Jeddah Airport